2011 အတွင်း ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးခဲ့သူများ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » 2011 အတွင်း ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးခဲ့သူများ (၁)
2011 အတွင်း ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးခဲ့သူများ (၁)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jan 3, 2012 in Other - Non Channelized |6comments
2011 listing anzartone
ရွာထဲမှာ ရွာသူ၊ ရွာသားပေါင်း (၇၂၀၃) ယောက် ရှိပါတယ်။ (မယုံရင် မေးကြည့်။ လက်နှစ်လုံးပဲ ရှိလိမ့်မယ်) အဲဒီထဲကမှ “၂၀၁၁ အတွက် Listing တစ်ခု လုပ်ချင်လို့ပါ” ဆိုပြီး ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ့်အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်စေတာလေးတွေ၊ ထူးခြားခဲ့တာလေးတွေကို ရေးပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာမှာ ဒီနေ့ (၃.၁.၂၀၁၂) အထိ ကျွန်တော် အံစာတုံး အပါအဝင် (၂၀) ယောက်သော သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် အမှတ်တရ၊ ထူးခြားခဲ့တာတွေကို ရေးသားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါတွေကို အခု ဒီနေရာမှာ အပိုင်း (၁) အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖတ်ကြ၊ မှတ်ကြ၊ မန့်လိုရာသာ မန့်ကြစေတော့သတည်း ……………. ။
ဒါတွေအားလုံးဟာ ရွာသူား (၂၀) ယောက်တို့ရဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းက အမှတ်တရ၊ ထူးခြားခဲ့တာလေးတွေပါပဲ။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ရွာသူား အပေါင်းကိုလည်း မောင်းခတ်လိုက်ပါတယ်။ “2011 အတွက် Listing တစ်ခု လုပ်ချင်လို့ပါ” ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ရေးသားပေးကြပါဦးလို့ …. ။ အပိုင်း (၁) ပြီးပြီ ။
အားလုံးပြီးရင် ဘယ်လိုပြုစုပေးမလဲဆိုတာလေး စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ဖို့ စောင့်နေပါ၏
ကွန်မန့်ကို ပို့စ်ပြန်လုပ်ပြစ်မယ်ဆိုတာသိရင် အတည်ရေးပါတယ်
အခုတော့ မှတ်တမ်းဝင်သွားပြီဆိုတော့ ထားလိုက်ပါတော့
♫♪….♫♪……♫♪ ဇိအပြစ်နဲ့ ဇိသာ ရှိပါချေတော့လေကွယ်..ဟယ်..♫♪………..♫♪….♫♪
ဒလိုမှန်းသိ သများလဲ ကောင်းကောင်းရေးပါတယ်လို့ 
♫♪….♫♪..များပြစ်နဲ့ များသာ.ရှိပါစေတော့လေဂွဲ့ .ဟယ်….♫♪….♫♪..♫♪
နောင်တ တွေ ဆက်တိုက် ထပ်ရပြန်ပီ …
အခုမှ သေချာ ဖတ်ကြည့်လို့အခုမှ သိရတယ်
တို့ ပြောတာဒွေ ကို သေချာမှတ်ထားတယ်
ကြောက်ချာဂျီး ပါဗျို့ 
အညာဆေးရိုး ( မှတ်ချက် = ပေါက်ဖော် ဆေးရိုး ရောင်းသည် )
စိတ်သစ် ကိုယ်သစ် နဲ့ပိုက်ဆံအသစ်တွေ တစ်ထောကြီးရ
ကျန်းမာပျော်ရွှင် ပါစေ ဗျား
နာဒါတွေ ကြိုမြင်နေတယ် …
ဒါကြောင့် ဒီနှစ်ထဲမှာ ၁+၁ = ၃ ဖြစ်သွားတာ ထည့်မရေးတာ